अचार विनाग्रेट - थर्मामिक्स रेसिपीहरूसँग छोपिया सलाद ThermoRecines
Ensaladas1 मिनेट2 व्यक्ति250२ क्यालोरी
आजको नुस्खा काममा आउनेछ गर्मीमा फलहरू लिनुहोस् र यो अदुवा भिनाग्रेटको साथ छोसेको सलाद समुद्री किनार वा पोखरीमा लिनको लागि ताजा र धेरै सजिलो छ।
यसका लागी अचार भिनाग्रेट मैले केहि अदुवाको gherkins र chives प्रयोग गरेको छु। उनीहरूले त्यो अम्लीय बिन्दु दिन्छन् जुन हामीलाई धेरै मनपर्दछ र यो छोलेको स्वादको साथ राम्रोसँग जान्छ।
हामीले यो पनि पूरा गरिसकेका छौं ताजा सलाद पकाइएको ह्याम र ताजा चीजको साथ, जसले यसलाई धेरै पूर्ण डिश बनाउँदछ।
1 अचार विनाग्रेटको साथ छोसेको सलाद
2 Pickle Vinaigrette को साथ यो Chickpea सलादको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ?
ग्रीष्मकाल पनि फलफूल को लागी हो ... यो चाना सलाद संग रमाईलो
कुल समय: 1M
पकाइएको चनाको २ g० ग्राम
१०० ग्राम पकाइएको ह्याम
२०० ग्राम ताजा चीज
पिट गरिएको जैतूनको g 35 ग्राम
Pick अचार अचार girkins
सिरका मा6scallions
एप्पल साइडर सिरका को 1 ड्यास
१/२ चम्चा (खैरो आकार) तोरी
हामी पकाइएको छोलालाई सलादको भाँडोमा राख्छौं। यदि तिनीहरू डु boat्गाबाट आएका छन् भने हामीले त्यसलाई पखाल्नु पर्छ र कोर्रा गर्नु पर्छ।
हामीले गिलासमा ह्याम राख्दछौं र यसलाई प्रोग्रामिंगमा काट्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 3। हामी टुक्राहरू हटाउँछौं र छोलाको साथ सलादको कचौरामा राख्छौं।
सिसा नधोईकन, हामी pick अचार र ch सिभ्स राख्छौं। हामी तेल, सिरका र रायोको खन्याउछौं। हामी सबैको साथ सँगै काट्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 3। हामी बाँकी सामग्रीसँग सलादको कचौरामा हटाउँछौं।
बाँकी अचार र चाइभ्सलाई आधा टुक्रा पार्नुहोस्। हामी तिनीहरूलाई सलादको कचौरामा पनि थप्छौं। एक चुटकी नुन र काली मिर्च जोड्नुहोस् स्वाद र सबै सामग्री राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
अन्तमा, हामी पासेदार ताजा पनीर थप्छौं र सलाद सेवा दिनको लागि तयार छ।
Pickle Vinaigrette को साथ यो Chickpea सलादको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ?
यसलाई बनाउनका लागि तपाईले पहिले नै चिसो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ क्यान्ड स्ट्युज यद्यपि म तिनीहरूलाई घरमा पकाउन मनपराउँछु। त्यसो भए, म एक घरेलु ब्रोथ बनाउने अवसर लिन्छु जुन गर्मी भए पनि हामी तयार पार्न प्रयोग गर्न सक्दछौं धनी चामल र अन्य व्यंजनहरु।
थप्नुहोस् ताजा चीज सबै को अन्त मा। यसको एउटा नाजुक बनावट छ, त्यसैले यदि तपाईंले यसलाई धेरै चलाउनुभयो भने यो साना टुक्रा-टुक्रा हुन्छन्।
यदि तपाइँ शरीरको साथ चिज मनपराउँनुहुन्छ भने, तपाईं निको भएका पनीरको लागि नयाँ पनीर बदल्न सक्नुहुन्छ। यो छोला सलाद संग राम्रो जान्छ फेटा चीज।
तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तोरी जुन तपाइँ सब भन्दा डिजोन लाई मन पराउनुहुन्छ। भिनाग्रेटको लागि तपाईलाई धेरै मात्राको आवश्यक पर्दैन, त्यसैले यदि तपाईं छुट्टीमा हुनुहुन्छ र पूरै बोतल किन्न चाहनुहुन्न भने, तपाईले एउटा हेराफेको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन ह्यामबर्गरको साथ आउँदछ।
सजिलो पोर्टेबिलिटीका लागि कच्चा-फिटिंग ढाक्ने कन्टेनरमा अचार भिनाग्रेटको साथ छोपिया सलाद भण्डार गर्नुहोस्। त्यसैले तपाईं यसलाई मा खान सक्नुहुन्छ समुद्र तट, पोखरी, काम वा पहाडहरूमा हिड्न रूख मुनि।
राम्रो संग gazpacho र एक ताजा फल तपाईंसँग नोटको खाना हुनेछ। त्यसैले बीचमा खोज्नुहोस् हाम्रो व्यंजनहरु तपाइँको मनपर्ने चिसो सूप छनौट गर्नुहोस्।
थप जानकारी - गाजापाचोस / तरकारीहरुका साथ हल्का मलाईदार चामल
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सलाद र तरकारीहरू, तरकारीहरू, १ 15 मिनेट भन्दा कम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » समयको लागि » १ 15 मिनेट भन्दा कम » अचार विनाग्रेटको साथ छोसेको सलाद
कोको र कफी केक, अण्डबिना